5 Spanish masheya ekugadzirisa kudzikira kwehupfumi | Ehupfumi Zvemari
European Central Bank (ECB) nguva pfupi yadarika yakagadzirisa fungidziro yayo yezvehupfumi kune nyika dzeeurozone kwemakore anotevera. Iko kwakajekeswa izvo mukati megore rapfuura kukura kwave kuri 1,8%, iyo inomiririra mwero wayo unononoka kubvira 2014. Nepo zvegore ra2019, fungidziro inofungidzira kuti ichawedzera kwakatenderedza 1,1% kana ichienzaniswa ne1,7% iyo yaifungidzirwa muna Zvita. Kufungidzira kwenzvimbo dzemunharaunda kunongedzera kwariri kudonha kubva pa1,7% kusvika ku1,6% uye kunosiya maonero aro e2021 pamatanho akafanana, inova 1,5%.
Iyi mamiriro mukondinendi yekare inogona kushandira kugadzirisa inotevera portfolio yekuchengetedzeka iri mukati memiganhu yekudzikira kwehupfumi. With zvitsva zvitsva zvemusika wekutengesa uye zvakare kugadzirisa mune mamwe asingakwani mukati meiyi nyika panorama. Nechinangwa chekukurumidza kupedzisa gore neyakaenzana musitatimendi yemari yevashambadzi vadiki nepakati. Kunyangwe hazvo basa racho risingazove nyore kuita nekuda kwekusagadzikana uko misika yequity inogona kupa. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi mune mamwe emakosheni emusika weSpanish wemusika.
Kune rimwe divi, zano iri rekugadzirisa kudzikira kwehupfumi ichave yakagadzirwa nekuchenjerera kukuru mumatokisi akasarudzwa. Pazvinenge zvichinyanya kukosha kuti iwe utore hanya mukusarudza zvekuchengetedzwa kwemasheya izvo zvisina yakasimba yekufungidzira uye izvo zvingangoita kuitira kuti iwe urasikirwe nemari yakawanda mukuita kunoitwa mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
1 Mamiriro ekunze kudzikira: Iberdrola
2 Telefónica, nemitengo yakaderera kwazvo
3 Mediaset uye simba rechikamu
4 Grifols: kufambira mberi kurwisa Alzheimer's
5 Enagás ine kugadzikana kwakawanda
Mamiriro ekunze kudzikira: Iberdrola
Ndiyo imwe yetsika dzakachengeteka kwazvo dzeIbex 35 panguva ino uye inozivikanwa nekuve kugadzikana kwazvo mumashoko avo. Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti mitengo yavo parizvino iri kufamba nenzira yakajeka kumusoro kumusoro. Kunyangwe zvirinani, iri mukumuka kwemahara inova imwe yezviitiko zvakanakisa zvekuchengetedzeka kana zviwanikwa zvemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti haisisina maratidziro akakodzera kumberi. Iko maitiro ayo ari nani pane mune mamwe machengetedzo munguva dzisingafadzi dzemisika yemari.
Telefónica, nemitengo yakaderera kwazvo
Iyo yekufambiswa kwekufambisa opareta ndeye yakanakisa musika wemari bheji kuti uzive mamiriro emamiriro ekusagadzikana mumisika yepasi rose yemisika. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti Telefónica inoramba ichifarirwa nemusika, kunyangwe paine dzimwe pfungwa dzakaipa kubva kune vamwe vaongorori vezvemari. Muchokwadi, inopa kukura kwekukwanisa mumutengo wemasheya ayo iyo inonakidza kwazvo kune vashoma nepakati varimi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti boka rekutaurirana reSpanish rakakoshesa mumwedzi mitanhatu yadarika dzakakomberedza 13% uye mumwedzi yekutanga yegore rino zvakazviita pamatanho ari padyo ne3%. Chikonzero chakanaka chekuenderera mberi nekuvimba imwe yemakuru ebhuruu machipisi emari yenyika.
Mediaset uye simba rechikamu
Ehe, isu hatigone kukanganwa kuti Mediaset España musimba wechitoko une hukasha uye kuti inopa kusagadzikana kwakanyanya pamutengo wayo wezuva nezuva. Asi zvakare hazvikurudzirwe kunonotsa pfungwa yekuti ikambani yeinosarudza indekisi yeSpanish equities, Ibex 35, iyo inogovanisa chikamu chakanakisa kune avo vanogovana navo. Iine purofiti ingangoita 10% uye izvo zvinogona kuve chikonzero chakakosha kwazvo kutora chinzvimbo kubva zvino zvichienda mberi.
Kwete zvisina maturo, mumakore mashoma kutora chikamu kunogona kuverengerwa nemadhora akaunganidzwa kuburikidza nemubhadharo uyu. Kuwedzeredza kunyange izvo zvinopihwa nemakambani anonyanya kukosha mumusika wemasheya wenyika. Ichiri kune rumwe rutivi, inoramba iri mune inopinza kukwidza Izvo zvinogona kushandiswa kutanga mashandiro ekutanga kuitira kuti kuchengetedza kubatsire mune yepakati nepakati yakareba.
Grifols: kufambira mberi kurwisa Alzheimer's
Mukati meiyo inodzivirira chikamu, imwe yehunhu hunogona kushamisa vashoma nevapakati varairidzi maGrifols, ayo anogona kukwirisa zvakatowanda zvinhanho kunyange muzviitiko zvakaipisisa zvemisika yemari. Mupfungwa iyi, Grifols ikambani yeSpanish yemarudzi mazhinji inyanzvi mu chemishonga uye chipatara chikamu, ndiyo yechitatu kambani hombe pasi rose muchikamu chezvigadzirwa zveropa. Mutengo unochengetedzwa kutenderera makumi maviri nesere euros pamasheya. Asi iine mukana wekuvandudzwa uyo unogona kusvika pamatanho padyo padyo ne28 euros.
Kune rimwe divi, yakamira kunze mumutengo mushure mekuziviswa kwakaitwa pamusoro pekufambira mberi kwayo neAlzheimer's. Uye kwazvinogona kupa zvimwe zvitsva zvinowedzera mutengo wayo pamasheya ekutsinhana. Mukuwedzera, haina hukama hukuru ne kutenderera kwehupfumi saka inogona kuita zvirinani zvirinani muma bearish zviitiko mumisika yequity.
Enagás ine kugadzikana kwakawanda
Chekupedzisira, hatigone kukanganwa Enagás, iyo inogona kuramba ichiita zvakanaka chaizvo sezvo zvave kujaira kwatiri mumakore apfuura. Chimwe chezvinhu izvo pasina mubvunzo chinobatsira nzira iyi ndechekuti parizvino iri pasi pechimiro che sununguka kusimuka. Iyo inonyanya kubatsira chero chengetedzo iyo yakanyorwa pamusika wemasheya uye ndiyo ine njodzi diki kune mashandisiro evashandisi vemasheya.
Saka kuti nenzira iyi, isu tinogona kunyatso kudzikama kana tichivhura nzvimbo kubva zvino zvichienda mberi. Mune chikamu chinoshanda sekupotera chaiko muzviitiko uko kutengesa kunoiswa pakutenga. Nechibereko chemugovano chakatenderedza 6% pagore uye ndiyo nzira yekumisikidza yakatarwa mari yemari mukati meiyo musiyano. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi iyo kukosha kunogona kupfuura nemhando dzese dzemamiriro, mune imwe pfungwa kana imwe. Nesarudzo ndeyekukwira zvinzvimbo mumwedzi iri kuuya, kunyangwe kana zvisiri nekudzoka uko kusiri kukwirira zvakanyanya mukusimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 5 Spanish masheya ekugadzirisa kudzikira kwehupfumi